Football Khabar » ‘खेलाडीको आलोचना गर्ने’ क्लबका खेल निर्देशकसँग मेस्सी ‘फायर’ : भएको के थियो ?
‘खेलाडीको आलोचना गर्ने’ क्लबका खेल निर्देशकसँग मेस्सी ‘फायर’ : भएको के थियो ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लिओनल मेस्सी र खेल निर्देशक इरिक अबिडालबीच टकराव चर्किएको छ । बार्सिलोनाका पूर्वखेलाडीसमेत रहेका अबिडालले हालै एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै खेलाडीको मेहनत र प्रदर्शनको स्तरप्रति प्रश्न उठाएपछि मेस्सी रिसले चुर भएका हुन् ।
अक्सर यस्ता विषयमा नबोल्ने शान्त स्वभावका मेस्सीले यसपटक रिस थाम्न नसकेर सामाजिक सन्जालमै आफ्नै क्लबका कार्यकारी खेल निर्देशकलाई ताकेरै आलोचना गरेका छन् । मेस्सले आफ्नो इन्स्टाग्राममार्फत् अबिडालको अन्तर्वार्ताको कडा शब्दमा खण्डन गर्दै उनले भने जसरी मेहनत गर्ने खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्न चुनौती नै दिएका छन् ।
स्पेनिस पत्रिका ‘स्पोर्ट’सँग विशेष कुराकानी गर्दै अबिडालले पूर्वप्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेको नेतृत्वमा ‘केही खेलाडी’ले मेहनत नगरेको भन्दै नाम नतोकी खेलाडीहरूको आलोचना गरेका थिए । उनले भनेका थिए–
‘म पूर्वखेलाडी भएका नाताले डे«सिङ रुमका कतिपय कुरा थाहा पाउँथें । भाल्भर्डे (पूर्वप्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डे) को कार्यकालमा केही खेलाडीले राम्रो मेहनत नगरेको जानकारी हामीलाई थियो । खास गरी पहिलो इएल क्लासिकोबाटै यो कुरा हामीलाई अनुभूत भएको थियो ।’
यसरी क्लबका खेल निर्देशकले आफ्नै खेलाडीको कामप्रति प्रश्न उठाएपछि मेस्सीलाई सनक चढ्यो । उनले आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् । र, इन्स्टाग्राममार्फत् अबिडालको आलोचना गरे, जो उनका पूर्वसहकर्मीसमेत हुन् । मेस्सीले अबिडालको नाम नलिई स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी लेखेका छन्–
‘यदि तिमी खेलाडीका बारेमा बोल्छौ भने तिमीले उनीहरूको नाम भन्नु आवश्यक छ, जसले महेनत गरेनन् वा गरेका छैनन् । हैन भने, यो बकवास कुरा हुन्छ, जो सत्य हुन सक्दैन ।’
यसअघि बार्सिलोना ला लिगाको शीर्ष स्थानमा रहेकै बेला सुपर कपको सेमिफाइनलबाटै आउट भएपछि बार्सिलोनाले भाल्भर्डेलाई पदबाट हटाएर क्विके सेटिनलाई अनुबन्ध गरको थियो । त्यसपछि बार्सिलोना खराब प्रदर्शनतर्फ धकेलियो । र, तीन खेलमा ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । सोहीक्रममा सेटिनको दोस्रो खेलमै ला लिगामा अवे मैदानमा बार्सिलोना २–० ले हारेपछि लिगको शीर्ष स्थान गुमेको थियो ।
अन्तर्वार्ताक्रममा अबिडालले खेलाडीले मेहनत नगरेको कुरामा जोड दिँदै आन्तरिक रूपमा सञ्चार समझदारीमा समेत केही कठिनाइ रहेको बताएका थिए । तर, मेस्सीले भने अबिडालको भनाइप्रति सोझै आपत्ति जनाएका छन् । उनले अघि थपेका छन्, ‘मलाई यस्ता कुरा मन पर्दैन । तर, सबै मानिस आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, राम्रो वा खराब अवस्थाको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ ।’
अबिडालले सन् २००७ देखि २०१३ बार्सिलोनामा खेलेका थिए । सोक्रममा ६ सिजन अबिडाल र मेस्सी सहकर्मी थिए । अहिले उनै अबिडाल बार्सिलोनाको खेल निर्देशक छन् ।
प्रकाशित मिति २२ माघ २०७६, बुधबार १८:४०